Shirka ka socda Muqdisho malagu xalin karaa Caqabadaha jira? | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka ka socda Muqdisho malagu xalin karaa Caqabadaha jira?
Villa Somalia waxay diiday inay doorasho hufan oo ku dhacdo waqtigeeda in Soomaaliya laga qabto sanadkii tagey, waxaana shaki ku jira sanadkan in lasoo gabagabeyn karo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka waxaa loo qabtay inuu xaliyo dhowr caqabadood oo ku hor-gudban doorashooyinka dalka, kuwaasoo ay adag tahay in si fudud madaxda shiraysa wax uga qabtaan.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee soo dedejiyay shirka qabashadiisa waxaa kamid ahayd boobka iyo musuq-maasuq doorashadda, oo mucaaradka ku cadaadiyeen Rooble inuu shir wadatashi isagu yeero, oo la saxayo qaladaadka jira.
Su'aasha qof walba is waydiinaya ayaa ah shirka socda maalintii 4aad xal ma u noqon karaa dhiibaatooyinka taagan? Waxay u badan tahay jawaabta MAYA, maadaama halka caqabada ka timid oo Farmaajo ah wali fadhiyo Villa Somalia, islamarkaana wali sii wata shirqooladiisa fashilinta doorashadda, kuna fekeraya waxyaabo kale.
Musharixiinta waxa ku baaqeen in dib loogu laabto dhamaan kuraasta doorashadooda lagu muransan yahay, sidoo kalena gudiyada doorashooyinka laga saaro xubnaha aan dhex-dhexaadka ahayn ee Farmaajo daacadda u ah. Tani inay Madaxda Shiraysa wax ka qabtaan waa macquul, maadaama go'aankaas gacantooda ku jiro.
Laakiin, mida ugu culus, waqti badana qaadan doonto ayaa ah degaan doorashadda labada degmo in la bedelo, oo hal degmo laga dhigo, taasoo u baahnaan doonta in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiskii Sep 17, kaasoo Farmaajo saxii ku leeyahay, laguna ansixiyay codka Gollaha Shacabka, oo hadda waqtigooda dhacay, iyadoo Baarlamaanka cusub oo sharciyad haystana jirin.
Waxaa hubal ah, oo lawada ogyahay in aysan macquul ahayn in labo degmo Maamul kasta lagu qabto doorashadda, waayo taasi kama suurta-galayso Jubbaland, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed, oo khilaaf ka taagan, sidoo kalena amniga laga baqayo.
Doorashadda Soomaaliya waa mid dhinac walba mushkilad ka taagan, oo culeyskeedu batay, waxaana Farmaajo iyo Mursal wadaan qorsho ah inay ku dhawaaqaan in waqtiga Heshiiskii doorashadda Sep 17 dhacay, islamarkaana ay dhihi doonaan Rooble wuxuu ku fashilmay waqtigii la siiyay in hal sano ku qabto doorasho, sidaas darteedna maadaama aan la dooran Baarlamaanka 11-aad, uu sii shaqeyn doono kii hore.
Beesha Caalamka ayaa ka rajo dhigtay doorashadda Soomaaliya, waxayna horey u sheegeen in hadii aan waxba socon la laalab doonaan lacagtii ay u qoondeeyeen oo gaareysa $3.7 milyan, waxaana dhawaan ay sheegeen in madaxda shirsan looga baahan yahay inay jadwal la isku haleyn karo, lana fulin karo inay u sameeyaan waqtiga lagu soo dhameystirayo doorashadda.